MRB Fisakanana andiany HPC
Betsaka amin'ny antsika Kaonteran'ny fibodoanadia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana anao amin'ny antsipiriany momba ny anay Kaontera fibodoana.
Ity andiana vokatra ity dia natokana ho an'ny kaontera mpanofa ny fifehezana fibodoana, izany hoe, rehefa ekeny fa mihoatra ny sanda napetraka izy io, dia halefa ny fanairana hahatratra ny tanjon'ny fifehezana ny fivezivezin'ny olona, ​​manana maodely marobe isika Kaonteran'ny fibodoana ho an'ny fanovozan-kevitrao.
Tamin'ny faran'ny taona 2014, tanàna lehibe iray any Shina dia tsy nanana rafitra fanaraha-maso ny fibodoana taloha, izay niteraka tranga lehibe. Tamin'ny 31 Desambra, ity tanàna ity dia tsy nandamina hetsika isaky ny alin'ny Taom-baovao, fa mbola maro ny olona tonga ho any an-tanàna. Toerana mariky ny tanàna no notanterahina tamin'ny alin'ny Taom-baovao, saingy tsy nampoizina fa niteraka loza izany. Ny antony mivantana nahatonga an'io loza io dia satria lehibe loatra ny fivezivezin'ny olona ao amin'ny Bund. Satria tsy nisy ny rafitra fanaraha-maso ny fibodoana dia tsy nisy antontan'isa ara-potoana hampielezana ny fivezivezin'ny olona. Andao izao hiresaka momba nyKaontera fibodoana.
Ahoana ny fanisana olona marobe toy izany? Tsy maintsy ataon'ny matihanina izanyKaontera fibodoana. Kaontera fibodoanadia vokatra vaovao miorina amin'ny teknolojia infrared, 2D, 3D, AI ary hafa. Manana fanisana marina kokoa izy io ary fampitana data marin-toerana kokoa. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fiasan'ny terminal finday maranitra, izay mety kokoa sy haingana kokoa.Fakan-tsarimihetsika fanisam-ponenana mirakitra ny isan'ny olona mikoriana ao anatin'ny sehatry ny asa mahomby, ary mamindra ny angona amin'ny terminal finday hanaovana fanadihadiana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko, ary ny tahirin-kevitra voadinika dia azo aondrana mivantana ihany koa mba hiteraka tatitra.
Fakan-tsarimihetsika fanisam-ponenana afaka mampifandray angona lehibe ihany koa. Ampiasaina amin'ny toeram-pivarotana lehibe, efitrano fampirantiana, trano famakiam-boky, trano fijerena sarimihetsika, gara ary toerana manintona mpizaha tany hafa io toerana io, satria be dia be ny fivezivezena amin'ireo olona ireo ary mitaky matihanina.Fakan-tsarimihetsika fanisam-ponenanahanangona statistika. Ny MRBFakan-tsarimihetsika fanisam-ponenana afaka mamorona angon-drakitra mikoriana ny olona isaky ny vanim-potoana ilaina, ary afaka mamorona tabilao isan'ora, andro, herinandro, volana ary taona, mba hahafahany manao statistika marina, mampiditra data, ary misintona ny tatitra amin'ny terminal finday. Ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny fibodoana dia azo tanterahina miaraka amin'izay. Rehefa mihoatra ny sanda napetraka ny fikorianan'ny olona dia hisy ny fanairana
Lahatsary mpanohitra MRB fibodoana
Manana karazana IR maro isika Kaontera fibodoana, 2D, 3D, AI Kaontera fibodoana, misy hatrany izay mety aminao, azafady mba mifandraisa aminay, hanoro ny mety indrindra izahay Kaontera fibodoana ho anao ao anatin'ny 24 ora.
Teo aloha: Ny mpanohitra tsy misy tariby MRB an'ny olona HPC005
Manaraka: Kaontera mpandeha ho azy MRB ho an'ny fiara fitateram-bahoaka HPC168
Kaontera mpanorina trano
Sensor an'ny mpanohitra
Counterancy Monitoring Counter
Counterancy Counter Counter